ngu admin nge-20-05-08
I-China lilizwe elinobutyebi obuncinci behlathi. Umgangatho wokugawulwa kwehlathi kunye nepropita nganye ingaphantsi komndilili wehlabathi. Kwangelo xesha, iChina ikwindawo enomlilo omkhulu. Oko kwasekwayo eli lizwe, umyinge we-12,000 yemililo eyenzeka rhoqo ngonyaka. Ngaphezulu kwama-700, ...
Ukusuka kunxibelelwano olungxamisekileyo isicwangciso sesilumkiso sokusekwa kwenkqubo yenkxaso yexakeka
ngu admin nge-20-04-17
Kwiiyure ezintlanu emva kwenyikima yaseWenchuan eChina ngaloo nyaka, uthungelwano lwakhubazeka ngokusisiseko, kwaye izinga lokuxhuma kwefowuni lafumana i-75% kwiyure enye emva kwenyikima yaseLushan. Siyintoni isizathu? Kuxelwe ukuba luxwebhu lwesicwangciso lukazwelonke olukhutshwe ngu-Ministry of ...
Yeyiphi imisebenzi yenkqubo yokuhlola umlilo ehlathini
ngu admin nge-20-03-20
Isebe lezamahlathi lithwala uxanduva lokukhusela ubutyebi behlathi. Isantya sokunxibelelana, esichanekileyo nesikhuselekileyo esineengcingo zokunxibelelana kwangoko sisixhobo esibaluleke kakhulu kwisebe lamahlathi ukufezekisa imisebenzi yalo. Kwiminyaka yakutshanje, ngokufudumala kwehlabathi kunye nokuhamba rhoqo ...
Indlela yokuhambisa unxibelelwano olukhawulezileyo kwiimeko zikaxakeka ezinkulu?
ngu admin nge-20-02-15
Malunga ne-7: 15 pm nge-7 kaMatshi, iXinjia Hotel eQuanzhou, eFujian, China yawa ngequbuliso. Emva kwengozi ewohlokayo, isebe lolawulo likaxakeka laqala kwangoko impendulo, lathumela iqela lokuhlangula umlilo kwindawo leyo ukuhlangula, lathumela kwaye lalathisa indawo ...
Amathuba amatsha othungelwano lwaBucala: Unxweme olutsha loTshintsho lweDijithali luyeza
Umsebenzi wokwazisa ngemveliso kunye nenguqu yedijithali ihlala isesinye sezona zinto zibalulekileyo zokuqhuba kuphuhliso lolwazi kunye namashishini onxibelelwano. Yinjongo yophuhliso lwe-ICT ukuqhubeka ukhuthaza iimfuno, umdla, kunye nezizathu zohanjiso lwedijithali ...
Ukusetyenziswa kwe-UAV kunxibelelwano olungxamisekileyo
ngu admin nge-19-12-08
Kwimeko yexesha likaxakeka, unxibelelwano lubalulekile kukhuseleko lwabasebenzi boncedo lokuqala kunye nokuqhutywa ngempumelelo kwezicwangciso zongxamiseko. Nangona kunjalo, ngexesha likaxakeka, iindawo zonxibelelwano zinokonakala: 1. Isimo sezulu esigqithileyo, njengoNogumbe weSithili saseNew Zealand Hunter, ...
Yintoni ubuchwepheshe be-COFDM?
ngu admin nge 19-11-03
I-COFDM (iCodeed Orthogonal Frequency Division Multiplexing ephindaphindiweyo). Kuqala makhe sichaze intsingiselo ye "khowudi". Iakhowudi kuthetha ukufaka iikhowudi (Umgaqo wokubhalwa komthombo usetyenziselwa ukusombulula ingxaki yokusebenza kakuhle kunye nekhowudi esetyenziswa isetyenziselwa ukuqinisekisa ukuthembeka kokuhanjiswa). Phambi kokumisela i-OFDM, ikhowudi yedijithali ...